खै सुन ? वाइडबडी के भो ? खै बालुवाटार ? सोध्नेलाई प्रधानमन्त्रीको प्रतिप्रश्न : यो सरकार आएर गरेको हो र ? - Saptakoshionline
खै सुन ? वाइडबडी के भो ? खै बालुवाटार ? सोध्नेलाई प्रधानमन्त्रीको प्रतिप्रश्न : यो सरकार आएर गरेको हो र ?
प्रकाशित मिति: मंगलबार, बैशाख २४, २०७६ समय: १२:१९:१७
भ्रष्टाचार निवारणमा सम्बन्धमा कतिपय माननियले चर्का चर्का कुरा उठाएको सुन्दा अचम्म लाग्छ मलाई । बालुवाटार पनि बिकेछ । खै बसपार्क ? यो सरकार बनेपछि खुल्लामञ्च मास्या हो र ? खुल्लामञ्च त अगाडी मासिएको थियो । अहिले त्यस खुल्लामञ्चलाई फिर्ता ल्याउने काम हुँदैछ ।
अहिले बालुवाटारको समस्या पैदा भएको हो ? अहिले त छानविन हुँदै छ त्यहाँ । खोजी हुँदैछ अहिले । अनि वाइडबडीको कारोबार यो सरकार आएर गर्या हो ? छानविन हुँदैछ अहिले ।
गुठीका जमिनहरुको, सार्वजनिक सम्पत्तीहरुको हिनामिना अहिले भएको हो र ? पहिला भएकाको छानविन हुँदैछ अहिले ।
अहिले सुनतस्करीका कुरा पनि पटक पटक उठाको सुनियो । सुनतस्करी के भयो ? बन्द भयो । सुनतस्करी के हुनु । बन्द भयो । पहिला पहिला चलिराख्या थ्यो । प्वालस्वाल टालेर बन्द गरियो । गर्नेहरु अहिले जेलमा छन् । तुवाइयो भनिन्छ । समातेर झ्यालखान हालेपछि,अदालतमा मुद्धा भएपनि अनि के हुन्छ त ? अरु के गर्नुपथ्र्यो ? सुसनतस्करी पहिला ३८ क्विन्टल भएको रहेछ अपराधिरुको बयानअनुसार । कहाँ गयो ? त्यो पहिलेका सरकारले जान्लान् । गइसकेपछि थाहा पाइयो । त्यसकारण त्यसलाई रोकियो ।
(सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथीको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दिनुभएको जवाफ)